Ngaba kufanelekile ukuvuselela i-OnePlus 5 / 5T ye-OnePlus 6T entsha? | I-Androidsis
Izolo isizukulwana esitsha senkampani ye-OnePlus, i-6T, ibiziswe ngokusesikweni, indawo enokuthi ithathelwe ingqalelo njengesizukulwana esitsha kwaye ayilulo ulungiso lwezithambiso olulula kunye nokusebenza komanduleli wayo, njengoko bekuqhele ukwenziwa kule minyaka idlulileyo yinkampani, inkampani evuselela ukuphela kwayo rhoqo kwiinyanga ezi-6.
Kwaye nditsho isiphelo sayo, kuba inesiphelo esinye kuphela kwintengiso, ngaphandle kwento yokuba ngokusungulwa kwezizukulwana ezitsha, iyaqhubeka nokuthengisa, okwethutyana, isizukulwana esidlulileyo ngexabiso eliphantsi. Ngokufika kwe-OnePlus 6T, sinyanzelekile ukuba siqwalasele ukuba i-OnePlus 5 okanye i-OnePlus 5T kufanelekile ukuba uyihlaziye.
Zombini i-OnePlus 5 kunye ne-OnePlus 5T zilawulwa yiQualcomm's Snapdragon 835 kwaye zikhatshwa zii-6 kunye ne-8 GB ye-RAM, kuxhomekeke kwimodeli ekhethiweyo, iprosesa ebona ukuzibophelela kwenkampani malunga nohlaziyo, sisenako ukuba ne-smartphone okwexeshana.
Kodwa ingaphakathi ayisiyiyo kuphela inkalo eguqukileyo, njengoko kusengqiqweni kwinkampani. Ubungakanani bekhusi libeyinxalenye yale modeli ngaphezulu kuguqukile kwizizukulwana ezibini ezidlulileyo, Ifikelele kwii-intshi ezingama-6,41 ezidibanisa i-OnePlus 6T. Ukuba ufuna ukususa ukungathandabuzeki kwaye ujonge ukuba utshintsho kwi-OnePlus 5 ukuya kwi-OnePlus 6T kufanelekile ukuba uqwalasele ukuvuselela i-smartphone yakho, nantsi itafile ethelekisa.
1 I-OnePlus 5 vs OnePlus 5T vs OnePlus 6 vs OnePlus 6T
2 Ukubonakala kweefoto
4 Ubomi bebhetri
5 Unxibelelwano lwentloko
6 Imemori kunye neprosesa
I-OnePlus 5 vs OnePlus 5T vs OnePlus 6 vs OnePlus 6T
Isikrini I-6.41-intshi ye-Super AMOLED epheleleyo ye-HD + I-6.28-intshi ye-Super AMOLED epheleleyo ye-HD + I-intshi enkulu ye-AMOLED 6.01 intshi I-intshi enkulu ye-AMOLED 5.5 intshi
Isigqibo Iiphikseli ezingama-2.340 × 1.080 Iiphikseli ezingama-2.280 × 1.080 Iiphikseli ezingama-2.160 × 1.080 Iiphikseli ezingama-1.920 × 1080
Ukukhuselwa I-Gorilla Glass 6 I-Gorilla Glass 5 I-Gorilla Glass 5 I-Gorilla Glass 5
Umyinge wezinto 19.5: 9 19: 9 18: 9 16: 9
Cámara trasera I-16 kunye ne-20 megapixels I-16 kunye ne-20 megapixels 16 no-20 mpx ukuvula f / 1.7 16 no-20 mpx ukuvula f / 1.7
Ikhamera yangaphambili Iimegapixels ezili-16 | f / 1.7 | Ukujonga ngokuzenzekelayo Iimegapixels ezili-16 | f / 1.7 Iimegapixels ezili-16 | f / 2.0 Iimegapixels ezili-16 | f / 2.0
Inkqubo I-Snapdragon 845 - 10 nm-ukuya kuthi ga kwi-2.8 GHz I-Snapdragon 845 - 10 nm-ukuya kuthi ga kwi-2.8 GHz I-Snapdragon 835 - 10 nn-ukuya kwi-2.45 GHz I-Snapdragon 835 - 10 nn-ukuya kwi-2.45 GHz
Imizobo Adreno 640 Adreno 640 Adreno 540 Adreno 540
i-ram 6 / 8 GB 6 / 8 GB 6 / 8 GB 6 / 8 GB
Ukugcina 128 / 256 GB 128 / 256 GB 64 / 128 GB 64 / 128 GB
Ibhetri 3.700 mah 3.300 mah 3.300 mah 3.300 mah
Isatifikethi sokuchasana Ukuxhathisa Hayi Hayi Hayi
Isivamisi somnwe Ewe idityaniswe kwiscreen Ewe Si Si
I-headphone jack Hayi Ewe Si Si
USB-C Ewe Ewe Si Si
Ukuqwalaselwa kobuso Ewe Ewe Si Si
Ukutshaja ngaphandle kwamacingo Hayi Hayi Hayi Hayi
Ubukhulu 157.5 × 74.8 × 8.2 mm 155.7 × 75.4 × 7.75 mm X x 156.1 75 7.3 mm X x 154.2 74.1 7.25 mm
U bunzima I-185 gram I-175 gram I-162 gram I-153 gram
Icandelo lokufota kuluhlu lwe-OnePlus ihleli ngokungatshintshanga kwiimodeli ezine zokugqibela, Kwaye bonke basebenzisa i-optics eyenziwe nguSony ngasemva kwesiphelo, sisisigqibo esifanayo, nakwiimodeli ezine zokugqibela eziqaliswe yinkampani. kwaye siyacinga ngolu thelekiso.
Apho ukuba sinokubona indaleko, ikwikhamera engaphambili yesixhobo, ikhamera esele isukile ekunikezeleni nge-16 mpx yesisombululo kunye nokuvulwa kwe-f / 2.0 ukuya kusonjululwa ngokufanayo kodwa kunendawo enkulu yokuvula f / 1.7, evumela ukufumana iziphumo ezingcono kwimeko ezinokukhanya okungaphantsi kokukhanya.
Ubungakanani bescreen yeyona nto iguqukileyo kolu luhlu, ukusuka kwii-intshi ezi-5,5 nge-16: 9 screen ratio ye-OnePlus 5T ukuya kwii-intshi ezingama-6.41 nge-19.5: 9 screen ratio ye-OnePlus 6T, ukugcina imilinganiselo efanayo yesiphelo. Ukongeza, isisombululo sesikrini sonyusiwe, sinika isisombululo se-2k kwimodeli yokugqibela ebonisiweyo, ngelixa i-OnePlus 5 ifikelele kwisisombululo se-FullHD, ngaphandle kokudityaniswa.
Umgangatho wepaneli, ngaphandle kokuba bekukho i-AMOLED kule minyaka idlulileyo, umgangatho wayo uphucule ngokubonakalayo, unikezela kwiimodeli zamva nje. imibala isondele kakhulu kwinyani, ukushiya ukugcwala okwenziwe ngolu hlobo lweepaneli ze-AMOLED.
Enye yezinto ezingathandekiyo esasinikwa yi-OnePlus 6, sayifumana kuba ngaphandle kokunyusa ubungakanani bescreen, ukufikelela kwii-intshi ezingama-6.28 ze-6 ezinikwe yi-OnePlus 5T, yile Ubungakanani bebhetri buhlala bunjalo: 3.300 mAh, amandla athe kwizihlandlo ezininzi awela kancinci. Ngethamsanqa, ngokusungulwa kwe-OnePlus 6T, inkampani ithathe ithuba lokwandisa amandla ebhetri ukuya kwi-3.700 mAh.
Esi sisiphelo asiboneleli ngenkxaso yokutshaja ngaphandle kwamacingo, umsebenzi inkampani engasasebenziyo ngenxa yokuba inkqubo yokulayisha icotha kakhulu. Kodwa ke, awungekhe ulandele indlela eyahlukileyo kunaleyo ikhethwe ngabenzi abaninzi kwaye kungekudala okanye kamva kuya kufuneka uyiphumeze kwiziphelo zabo.
Isizukulwana se-6T yinkampani yokuqala yokwenza luphele ngokupheleleyo unxibelelwano lwentloko yejackUkunyamalala okunokwenzeka ukuba kungenxa yokwanda kobungakanani bebhetri, kuba olu nxibelelwano luthatha indawo enkulu ngaphakathi kwesiphelo, indawo ethe ngethamsanqa isetyenziselwe okuhle.
Okwangoku kuphela yi-Samsung esabhejayo kolu nxibelelwano, nangona yonke into ibonakala ngathi ibonisa ukuba isizukulwana esilandelayo sophando lwayo, i-Galaxy S10 kunye neNqaku 10 ayisayi kuphinda ilusebenzise olu nxibelelwano Ibikunye nathi ukusukela nge60s.
Imemori kunye neprosesa
I-OnePlus yenye yeenkampani zokuqala ukubheja ekwandiseni inani lememori ye-RAM ukunciphisa ixesha lokulayisha kwezicelo esihlala sizisebenzisa, kuba ezi zihlala kwimemori, nanini na xa zikhona, endaweni yokuvala ngokuzenzekelayo. Kule meko, isizukulwana esitsha se-OnePlus 6T, iyaqhubeka nokusinika iinguqulelo ezimbini: i-6 kunye ne-8 GB ye-RAM.
Kwimeko yokungabikho kweeprosesa ezintsha, i-OnePlus 6T ikhethe ukusebenzisa iprosesa enye ngoku ekwiprosesa yayo, Snapdragon 845 yenziwe nguQualcomm, ngelixa zombini i-OnePlus 5 kunye ne-5T zikhethe isizukulwana esidlulileyo, i-Snapdragon 835 evela kumenzi ofanayo.
Umahluko phakathi kwezi nguqulelo zombini mncinci kakhulu, ukuba sizimisele ukutyala imali encinci ukuvuselela isiphelo sethu, siya kuyivuyela kwixesha elizayo, kuba ukusebenza kwayo kuya kuqhubeka kuya kuba kuninzi ngakumbi kunakwizitheminali ezinememori encinci ye-RAM.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ngaba kufanelekile ukuvuselela i-OnePlus 5 / 5T ye-OnePlus 6T entsha?
UAlex Valverde sitsho
Ndiyayithanda indlela oyile ngayo ukuba i-6 kunye ne-6T zine-slot ye-SD. Njengokubeka isatifikethi sokuchasana, chasa ukuxhathisa kwi-6T.
Abanayo i-SD okanye i-IPXX, enye into kukuba i-OnePlus ithi inokumelana nokuqaqamba.
Izikrini, ukusukela nge-5T, ibizizo zonke i-FullHD +, hayi i-2K.
Leyo yeekhamera utsho ukuba ngasemva akukho lutshintsho ngenxa yokuba ii-optics zivela kwaSony, kubonakala kum kuyinto engaphaya kokuzisola, kuba akukho xesha ukhe wazama imodeli yesenzi esetyenzisiweyo, eyona ndawo kugxilwe kuyo, iposti -ukwenziwa kwesoftware ...
Iskena seIris, asikho (njengobuchule bakho xa kufikwa ekwaziseni ngesixhobo), ukuvulwa kobuso bayo akuhambi kwi-iris, kodwa ngokuchonga amanqaku ali-100 obuso.
Andazi ukuba uyikhuphele phi le tafile, kodwa ndinethiyori ezi-3:
1. Awunakho ukufunda into oyikhuphelayo.
2. Awazi ukuba wazise njani ngale nto uyibhalayo.
3. Inadi yakho ibile ukuba iya kunxiba ntoni, nokuba yinyani okanye iyinyani.
Phendula kuAlex Valverde
Abasebenzisi abangama-90% bafuna ukwazi iinkcukacha ngokubanzi zefowuni, kungekhona ukuba inzwa entsha isebenzisa isizukulwana esitsha imodeli okanye iPasika, uhlobo lweememori ezisetyenzisiweyo, uhlobo lweyunithi yokugcina ... Ngokuphathelene nesisombululo esivela kwisikrini , Andazi ukuba usifumana phi isisombululo se-2k, andikasibeki nangaliphi na ixesha.
Nangona kuyinyani ukuba ndingumntu kwaye ndinokuba ndiphosakele, iinkcukacha endizithathileyo kwiwebhusayithi ye-OnePlus, ukuba uyazi ngaphezu kwabo, baxelele, hayi mna.
1. Umxholo wakho ophambili ngumbuzo, ongawuphenduliyo kwinqaku lakho ... Oko kukuthi, usilela kwisigqibo.
2.Ekupheleni uthetha nge-RAM, emva koko iprosesa, nasemva kweyantlukwano phakathi kwezi nguqulelo zombini.Kulolo hlobo, kubonakala ngathi uthetha ngumahluko phakathi kweeprosesa, hayi i-RAM.
3. Ukuxhathisa kwe-Splash kukhankanywe apha ngasentla, kodwa andiboni ukuba baqinisekisiwe okanye bakhankanyiwe kwiwebhusayithi yabo ...